Saint Petersburg State University - Study in Rosia
fanafohezan-teny : SPSU
Créé : 1724
mpianatra (eo ho eo.) : 33000
Aza adino ny hadihadio Saint Petersburg State University
Misoratra anarana ao amin'ny Saint Petersburg State University
Mahery 290 taona, St. Petersburg University efa nanolorana azy ho efa mandroso siansa, niteraka fahalalana sy fampiofanana miavaka matihanina. Ny University manan-karena amin'ny tantara - dia taonjato indray 1724, rehefa Peter Lehibe nanangana ny Akademia ny Siansa sy ny Zavakanto ary koa ny Academic voalohany University in Rosia.
Ny malaza SPbU Alumni dia loharanom-avonavona sy ny fahamendrehana, izay dia mitaona antsika mba hanan-tombo sy hanomezana vahana ny mety amin'ny fikarohana sy ny fanabeazana. Anisan'ireo ny Alumni sy ny mpiasa, misy miavaka isan'ny olona eran-malaza, manokana, Loka Nobel mpandresy: physiologist Ivan Pavlov, mpikaroka Ilya Mechnikov, ara-batana simia Nikolay Semyonov, fizika Lev Landau sy Aleksandr Prokhorov, filozofa sy ny mpahay toekarena Leonid Kantorovich. SPbU ihany koa ny Almà Mater ho an'ny tena mpikaroka, manam-pahaizana, manam-pahaizana, mpitarika ara-politika sy ara-tsosialy: Dmitry Mendeleev, Vladimir Vernadsky, ary Dmitry Likhachev ny anarana fa vitsy. Izao tontolo izao ahazoan'ny ny University malaza indrindra ireo mpitarika ara-kolontsaina, mpanoratra sy ny mpanakanto: Ivan Turgenev, Pavel Bryullov, Alexander Blok, Alexander Benois, Sergei Diaghilev sy Igor Stravinsky. Anisan'ny University Alumni, Mirehareha ihany koa isika lazaina intsony ny mpitarika ny governemanta Rosiana: Boris Forward, Alexander Kerensky, Vladimir Lenin, Présidents de l'Federasionan'i Rosia Vladimir Putin sy Dmitry Medvedev.
ankehitriny, telo taona taorian'ny izany dia naorina, Gas Station dia fiezahana, toy ny teo aloha, mba hitarika ny fikarohana sy ny fanabeazana eo amin'ny firenena sy maneran-. Amin'ny fitondrana miara-fomban-drazana sy ny fanavaozana, St. Petersburg University mamaritra ny haingana ho an'ny fampandrosoana ny siansa, ny fampianarana sy ny kolontsaina any Rosia sy manerana izao tontolo izao.
SPbU tanteraka Manampy ny mpianatra sy ny mpiasa noho ny tsara indrindra ny isan-karazany isan-karazany ny fahafahana ho an'ny fanabeazana, fikarohana sy ny fampandrosoana manokana: ny manan-karena indrindra Library fikarohana atao hoe taorian'ny M. Gorky, ny toetry-ny-ny-kanto Research Park, laboratoara tarihan'ny fitarihana mpahay siansa, tranombakoka, ny famoahana trano, fanatanjahan-tena langilangy, ny University antoko mpihira, orkesitra, tantara an-tsehatra sy ny dihy Studios sy ny sisa.
Tamin'ny volana Novambra 2009, Filohan'ny Federasiona Rosiana Dmitry Medvedev nanao sonia ny lalàna manome St. Petersburg University sy Moscou University-panjakana ny sata manokana ny 'tsy manam-paharoa sy ny fanabeazana ara-tsiansa-be, ny tranainy indrindra sekoly fanaovana fianarana ambony any Rosia satria ny manan-danja lehibe ho amin'ny fampandrosoana ny fiaraha-monina Rosiana '. SPbU Nomena tombontsoa mba hametraka ny fitsipika sy ny fanabeazana ny mari-pankasitrahana manokana diplaoma.
Fantaro voalohany Anjerimanontolo Rosiana izao.
Tongasoa eto amin'ny tobin-tsolika!
naorina in 1724 avy Peter Lehibe, Saint Petersburg University dia ho tonga ny voalohany rafitra ny fianarana ambony any Rosia. SPbU dia mpitarika Rosiana anjerimanontolo amin'ny fampianarana sy ny fikarohana tsara laharana eo amin'ny izao tontolo izao ny ambony oniversite. Isika misokatra amin'ny fiaraha-miasa sy mankafy fifandraisana matanjaka miaraka amin'ny iraisam-pirenena sy ny fianarana fikarohana fiaraha-monina. SPbU mpahay siansa miasa eo amin'ny sehatry ny ankamaroan'ny fahalalana, manome fahaizany sy ny fifampidinihana eo akaiky fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombon'antoka iraisam-pirenena Rosiana sy ny. Maro ny manam-pahaizana niavaka no anisan'ny fiaraha-monina ny SPbU, anisan'izany ny Loka Nobel sivy mpandresy: ny physiologist Ivan Pavlov, mpikaroka Ilya Mechnikov, fizika sy simia Nikolay Semyonov, fizika Lev Landau sy Aleksandr Prokhorov, filozofa sy ny mpahay toekarena Wassily Leontief ary koa ny mpahay matematika sy ny toekarena Leonid Kantorovich.
Anisan'ireo University Alumni dia ny Filohan'ny Federasiona Rosiana Vladimir Putin, Premier-Minisitra Dmitry Medvedev, Mpitantana ny Hermitage Mikhail Piotrovskiy, Filohan 'ny Rosiana Akademia Education Liudmila Verbitskaya, mpahay matematika Grigoriy Perelman sy Sergey Smirnov ary koa ny maro hafa.
106 undergraduate fandaharana
205 tompony fandaharan'asa sy ny faritra ny specialization
263 diplaoma doctorat fandaharana
29 pitsaboana mipetraka fandaharana
iraisam-pirenena mpianatra avy ny 70 firenena
over 3 000 iraisam-pirenena sy ny mpianatra amin'ny ambaratonga tsy mari-pahaizana fandaharana
350 mpiara-miasa anjerimanontolo
ny tsara indrindra Park oniversite Research in Rosia
7,000,000 boky ao amin'ny fanangonana ny amin'ny University Library Research
diplaoma navoaka in Rosiana sy Anglisy
12,800 toerana ao amin'ny efitrano ny ponenana
ny fandraisana anjara mavitrika ny mpianatra eo amin'ny fanabeazana dingana;
ny tsara indrindra fanatanterahana ny mpianatra tsirairay hery anaty;
ECTS - Eoropeana Sary nahazoan-Transfer System;
akademika fitsipika dia natao araka ny Modular fitsipika;
fifanakalozana mpianatra fandaharana amin'ny mpiara-miasa anjerimanontolo
fiofanana sy ny miasa amin'ny mpitarika Rosiana nametraka sy orinasa iraisam-pirenena;
tsy manam-paharoa ny fidirana amin'ny trano fikarohana, teknolojia sy feno-text elektronika angona;
fanabeazana teknolojia maoderina;
fanjakana-avy-ny-kanto fitaovana fikarohana;
-panjakana vatsim-pianarana ho an'ny tsara indrindra voafantina mpiadina iraisam-pirenena (saram-pianarana maimaim-poana sy ny discounted zavatra ilaina);
fahafahana hifehy Rosiana tao amin'ny Institute ny fiteny Rosiana sy ny Kolontsaina.
Faculty ny Applied Matematika sy ny Fanaraha-maso Ny fomba fanaovana
Institute ny Simia
Faculty ny Dentistry sy Medical Teknolojia
Institute of tany Sciences
Sekoly an'i Fifandraisana iraisam-pirenena
Faculty ny Liberaly Zavakanto sy ny Siansa
Faculty ny Matematika sy ny Mechanics
Faculty ny Oriental Fianarana
Institute of Filozofia
Faculty ny siansa politika
Faculty ny Psychology
Faculty ny bola ary
Sekolin'ny fanaovan-gazety sy ny lamesa Communications
Faculty ny Applied Communications
Faculty ny Fanaovan-gazety
Izany no niady hevitra ny anjerimanontolo fitantanana na Saint Petersburg State University na Mosko State University no tranainy indrindra fianarana ambony andrim-panjakana ao Rosia. Raha ny farany dia niorina tany 1755, ny teo aloha, izay efa teo amin'ny asa mitohy hatramin'ny 1819, mihambo ho ny mpandimby ny oniversite niorina miaraka ny Academic kianja sy ny Saint Petersburg Akademia Momba ny Siansa tamin'ny Janoary 24, 1724 amin'ny alalan'ny didim-panjakana ny Peter Lehibe.
Ao amin'ny vanim-potoana teo anelanelan'ny 1804 ary 1819, Saint Petersburg University tamin'ny fomba ofisialy dia tsy misy; ny fikambanana naorin'i Peter Lehibe, ny Saint Petersburg Academy, dia efa horavàna, satria ny vaovao 1803 Sata ao amin'ny Akademian'ny Siansa voalazan'ny fa tsy tokony hisy andrim-panjakana fanabeazana mpikambana izany.
Ny Petersburg pedagojika Institute, anarana ny Main pedagojika Institute in 1814, dia naorina teo an 1804 ary nibodo ny ampahany amin'ny Roambinifolo Collegia trano. tamin'ny Febroary 8, 1819 (O.s.), Alexander I Rosia averina alamina ny Main pedagojika Institute ho any Saint Petersburg University, izay tamin'izany andro izany Nizara telo fahaizanareo: Faculty ny filozofia sy ny Lalàna, Faculty ny Tantara sy Philology sy Faculty fizika sy matematika. Ny Main pedagojika Institute (Dmitri Mendeleev izay nianatra) naverina tamin'ny laoniny tamin'ny 1828 toy ny fanabeazana fikambanana tsy miankina amin'ny Saint Petersburg University, ary nampiofanina mpampianatra ambara-farany nakatona in 1859.
In 1821 ny oniversite dia anarana Saint Petersburg Imperial University. In 1823 ny oniversite ny ankamaroan'ny niala Roambinifolo Collegia any amin'ny faritra atsimon'i ny tanàna any an-dafin'i Fontanka. In 1824 ny farany dika ny sata ny Moscow University dia natsangana ho toy ny voalohany sata ao amin'ny Saint Petersburg Imperial University. In 1829 nisy 19 feno mpampianatra ary 169 manontolo andro sy ny tapa-potoana ireo mpianatra tany amin'ny oniversite. In 1830 Tsar Nicholas niverina ny trano manontolo 'ny Roambinifololahy Collegia niverina tany amin'ny oniversite, ary ny antokony Niverina tao. In 1835 Sata vaovao ny Imperial Anjerimanontolo Rosia dia nekena. Nanome ny fametrahana ny Faculty ny Lalàna, ny Faculty ny Tantara sy Philology, ary ny toetsaina ny Fizika sy ny Matematika dia natambatra ho amin'ny sampam-pianarana ny filozofia ho toy ny 1 sy 2 Departments, mifanaraka.
In 1849 araka ny Lohataona-pirenena ny Antenimieran-doholona ny Rosiana Fanjakana namoaka didy fa ny Rector dia tokony ho tendren'ny ny Minisitry ny National Marina fa tsy voafidy ny fiangonana ao amin'ny Oniversiten'i. Na izany aza, Pyotr Pletnyov dia tendren'ny Rector, ary farany lasa ny lava indrindra-fanompoana Rector ny Saint Petersburg University (1840-1861).
In 1855 Oriental fampianarana no tafasaraka amin'ny Faculty ny Tantara sy Philology, ary ny fahefatra sampam-pianarana, Faculty ny Oriental Fiteny, tamin'ny fomba ofisialy nitokana tamin'ny Aogositra 27, 1855.
Tamin'ny 1859-1861 vehivavy tapa-potoana ireo mpianatra afaka manatrika lahateny ao amin'ny oniversite. In 1861 nisy 1,270 manontolo andro, ary 167 tapa-potoana ireo mpianatra ao amin'ny oniversite, azy 498 teo amin'ny Faculty ny Lalàna, ny lehibe indrindra subdivision. Fa izao subdivision nanana fampianarana ny cameral departemanta, mpianatra izay nianatra fiarovana, arak'asa ny fahasalamana sy ny tontolo iainana sy ny fitantanana ny injeniera siansa, anisan'izany ny Simia, Haiaina, agronomy miaraka amin'ny lalàna sy filozofia. maro ny Rosiana, Zeorziana sns. mpitantana, injeniera sy ny mpahay siansa tao amin'ny Faculty nianatra ny lalàna noho izany. Nandritra 1861-1862 nisy korontana mpianatra ao amin'ny oniversite, ary dia vetivety indroa nakatona nandritra ny taona. Ny mpianatra dia nandà fahalalahana ny fivoriana sy napetraka eo ambany fanaraha-maso polisy, ary ireo lahateny ampahibemaso voarara. Maro ireo mpianatra no voaroaka. Taorian'ny korontana, in 1865, ihany 524 mpianatra sisa.
Didy ny Emperora Alexander II Rosia natsangany tamin'ny 18 Febroary 1863 indray ny zon'ny amin'ny oniversite fiangonana mba hifidy ny Rector. Izany koa dia namorona ny sampam-pianarana vaovao ny teoria sy ny tantaran'ny zavakanto izay tafiditra ao amin'ny sampam-pianarana tantara sy ny philology.
Tamin'ny volana Martsa 1869, mpianatra korontana nanozongozona ny anjerimanontolo indray fa amin'ny sehatra kely. By 1869, 2,588 efa nahazo diplaoma ireo mpianatra avy ao amin'ny anjerimanontolo.
In 1880 ny Minisitry ny National Marina nandrara ny mpianatra tsy hanam-bady sy ny manambady olona tsy azo niaiky. In 1882 mpianatra iray hafa korontana nitranga tany amin'ny oniversite. In 1884 Sata vaovao ny Imperial Anjerimanontolo Rosiana dia natsangana, izay nanome ny zo hanendry ny Rector ho ny Minisitry ny National Marina indray. tamin'ny Martsa 1, 1887 (O.s.) vondrona ny mpianatry ny oniversite voasambotra raha mbola mikasa ny fikasana eo amin'ny fiainana ny Alexander III Rosia. Vokatr'izany, fieken-keloka vaovao fitsipika ny kianja mitafo sy ny anjerimanontolo dia ankatoavin'ny ny Minisitry ny National Marina Ivan Delyanov in 1887, izay nahazo olona ny iva razana fiaviana avy fieken-keloka ho any amin'ny oniversite, raha tsy izy ireo faran'izay manan-talenta.
By 1894, 9,212 efa nahazo diplaoma ireo mpianatra avy ao amin'ny anjerimanontolo. Anisan'ny malaza manam-pahaizana ao amin'ny tapany faharoa amin'ny taonjato faha-19 mpikambana ao amin'ny oniversite dia mpahay matematika Pafnuty Chebyshev, fizika Heinrich Lenz, mpahay simia Dmitri Mendeleev andAleksandr Butlerov, embryologist Alexander Kovalevsky, physiologist Ivan Sechenov, pedologist Vasily Dokuchaev. tamin'ny Martsa 24, 1896 (O.s.), eo amin'ny tobim-pianarana ao amin'ny Oniversiten'i Alexander Popov nampiseho ampahibemaso fampitana ny onjam-peo alon-drano ho an'ny fotoana voalohany teo amin'ny tantara.
Tamin'ny Janoary 1, 1900 (O.s.), nisy 2,099 mpianatra nisoratra anarana tao amin'ny Faculty ny Lalàna, 1,149 mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana ny Fizika sy ny Matematika, 212 mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana ny Fiteny sy ny Tatsinanana 171 mpianatra ao amin'ny sampam-pianarana ny Tantara sy Philology. In 1902 mpianatra voalohany efitra fisakafoana tany Rosia novohana tany amin'ny oniversite.
Koa satria ny 1897 tsy tapaka sy ny mpianatra fitokonana korontana nanozongozona ny oniversite ka namelatra ny hafa sekoly fanaovana fianarana ambony manerana an'i Rosia. Nandritra ny revolisiona ny 1905 ny Sata ny Rosiana anjerimanontolo dia ahitsy indray, ny fizakantena ny anjerimanontolo ampahany tamin'ny laoniny, ary ny zo hifidy ny Rector dia niverina ho any amin'ny akademika birao voalohany hatramin'ny 1884. Tamin'ny 1905-1906 dia vetivety ny oniversite nakatona noho ny mpianatra korontana. Ny fizakantena dia foanana intsony indray ao 1911. Tamin'ny taona ihany ny oniversite dia indray mandeha indray nakatona vonjimaika.
In 1914 amin'ny fanombohan'ny ny ady lehibe voalohany, ny oniversite dia anarana Petrograd Imperial University taorian'ny namesake tanàna. Nandritra ny ady ny oniversite no zava-dehibe ivon'ny fanetsehana ny loharanon-karena ara-tsaina Rosiana sy ny vatsim-pianarana ho an'ny fandresena. In 1915 ny sampan 'ny oniversite dia nisokatra tany Perm, izay lasa Perm State University. Fiangonana, dia ny Petrograd Imperial University ampahibemaso nandray ny Febroary Revolisiona ny 1917, izay hamarana ny Rosiana fanjakana, ary ny oniversite dia tonga mba ho fantatra fotsiny Petrograd University. Na izany aza, taorian'ny Oktobra Revolisiona ny 1917, ny mpiasa sy ny fitantanana ny oniversite dia voalohany amim-peo avo nanohitra ny Bolshevik takeover ny hery sy tsy te hiara-miasa amin'ny Narkompros. Taty aoriana tamin'ny 1917-1922, nandritra ny ady an-trano Rosiana ny sasany tamin'ny mpiasa ahiahiana ny mpanohitra ny revolisiona mangoraka nijaly am-ponja (oh, Lev Shcherba in 1919), famonoana, na sesitany any ivelany eo ilay antsoina hoe filozofa’ sambo tao 1922 (oh, Nikolai Lossky). koa, ny mpiasa rehetra nijaly ny hanoanana sy ny fahantrana lalina nandritra ireny taona.
In 1918 ny oniversite dia anarana 1 Petrograd State University, ary amin'ny 1919 ny Narkompros natambatra azy tamin'ny 2 PSU (Psychoneurological teo aloha Institute) ary faha-3 PSU (Bestuzhev Ambony teo aloha Courses ho an'ny Vehivavy) any Petrograd State University. In 1919 ny Faculty ny Social Science dia naorina ny Narkompros fa tsy ny Faculty ny Tantara sy Philology, Faculty ny Tatsinanana Fiteny sy Faculty ny Lalàna. Nicholas Marr lasa Dean voalohany ao amin'ny sampam-pianarana vaovao. Simia Alexey Favorsky lasa ny Dean ny Faculty ny Fizika sy ny Matematika. Rabfaks sy maimaim-poana amin'ny oniversite taranja nisokatra ny fototry ny oniversite mba hanome fanabeazana faobe. Ao ny fianjeran'i 1920, araka ny nahita ny mpianatra freshman Alice Rosenbaum, fisoratana anarana dia misokatra sy ny ankamaroan'ireo mpianatra dia anti-komonista ao anatin'izany, mandra-panaisotra, vitsivitsy feo mpanohitra ny fitondrana. Satria izy ireo fampianarana “kilasy fahavalo”, ny fanadiovana no natao tao 1922 mifototra amin'ny kilasy fototra ny mpianatra sy ny mpianatra, hafa noho ny zokiolona, amin'ny olona antonontonony amny'ny mpia fototra no voaroaka.
In 1924 ny oniversite dia anarana Leningrad State University taorian'ny namesake tanàna. Mba hanafoanana ny fanoherana ara-tsaina ny Sovietika fahefana, maro ny mpahay tantara miasa ao amin'ny oniversite, anisan'izany Sergey Platonov, Yevgeny Tarle sy Boris Grekov, naiditra am-ponja tao amin'ny antsoina hoe Academic Affair ny 1929-1930 amin'ny namorona fiampangana ny mandray anjara amin'ny mpanohitra ny revolisiona tsikombakomba mikendry horavako io governemanta. Misy mpikambana hafa ao amin'ny mpiasa dia famoretana tamin'ny 1937-1938, nandritra ny fanadiovana goavana.
Nandritra ny 1941-1944 Toeram-Pamonjena Tao Leningrad any ny Ady Lehibe II, maro ny mpianatra sy ny mpiasa dia maty amin'ny hanoanana, amin'ny ady, na avy amin'ny fahefany. Na izany aza, ny oniversite niasan'ny tapaka, nafindra toerana ho Saratov tamin'ny 1942-1944. Ny sampan 'ny oniversite dia nampiantrano tao Yelabuga nandritra ny ady. In 1944 ny Presidium ny Filankevitra ny Firaisana Sovietika nahazo ny anjerimanontolo amin'ny Order ny Lenin ny tamin'ilay fotoana taona ny 125th sy ny fanomezana ny siansa sy ny kolontsaina.
In 1948 ny Filan-kevitry ny Minisitra atao hoe ny oniversite taorian'ny Andrei Zhdanov, iray vao haingana malaza nodimandry kaominista ofisialy. Ity fanapahan-kevitra ity foanana intsony amin'ny 1989 nandritra ny fanavaozana.
Tamin'ny 1949-1950 profesora maro no maty tany am-ponja nandritra ny fanadihadiana ny Leningrad Affair noforonina ny foibe sovietika mpitarika, ary ny Minisitry ny Fampianarana ao amin'ny RSFSR, Rector Alexander teo aloha Voznesensky, novonoina.
In 1966 ny Filan-kevitry ny Minisitra nanapa-kevitra ny hanorina toeram-pianarana vaovao ao amin'ny Petrodvorets suburban ho an'ny ankamaroan'ireo ny kajy sy ny siansa voajanahary fahaizanareo. Ny famindran-toerana ny ny toetsaina efa vita ny taona 1990.
In 1969 ny Presidium ny Filankevitra ny Firaisana Sovietika tamin'ny nahazo ny anjerimanontolo ny Lamin 'ny Red Banner ny Asa.
In 1991 ny oniversite dia anarana niverina tany Saint Petersburg State University taorian'ny namesake tanàna.
Ianao ve mila hadihadio Saint Petersburg State University ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Saint Petersburg State University ao amin'ny Map
Photos: Saint Petersburg State University ofisialy Facebook
Saint Petersburg State University Hevitra
Miaraha mba hifanakalo hevitra momba ny Saint Petersburg State University.
Rosiana State University ny Solika sy ny Gas Moscow
Pavlov Voalohany Saint Petersburg State University Medical Saint Petersburg
Moscow State University ny Civil Engineering Moscow